Vaovao - Fintino ny fizotran'ny asa sy ny fitandremana ny milina mofomamy mofomamy metaly
Momba ny Unite Top
Fitaovana metaly vy
milina fanontam-pirinty metaly
Machine mpanety metaly
fanetezana metaly alligator
milina hety mavesatra
metaly baler manety
Masinina mpanapaka bale
Varotra sy serivisy
Fintino ny fizotran'ny asa sy ny fitandremana ny milina mofomamy mofomamy metaly
Haratra metalydia karazana fako ateraky ny fanodinana ny vokatra metaly na ampahany. Izy io no akora fototra amin'ny famokarana vy avo lenta. Na izany aza, dia mila ny mangatsiaka-tsindrin'ny metaly shavings mofomamy mofomamy. Satria maro ny olona tsy mahafantatra ny fizotran'ny fiasan'ny fitaovana, ny fampandehanana sy ny fampiasana dia hisy lesoka sy olana isan-karazany amin'ny dingana. Ity ambany ity dia hitarika anao hahatakatra: ny fizotran'ny asa sy ny fitandremana ny milina mofomamy mofomamy metaly.
1. Ny fiasan'ny fitaovana
Ny dingan'ny fanindriana poti-vy ho lasa mofomamy dia dingan'ny fanerena mangatsiaka mivantana sy extrusion. Mandritra ny fizotran'ny extrusion dia tsy ilaina ny manafana na manampy binder. Ilaina ny mifidy tmila fitaovana fanohanana izy araka ny habeny sy ny endrik’ireo potika vy. Raha ny poti vy dia potika somary mitovitovy habe, ny poti vy dia azo alefa mivantana ao amin'ny hopper ny vy fako milina mofomamy amin'ny alalan'ny conveyor, ary ny vy potipoti-javatra dia evened amin'ny alalan'ny famahanana rafitra. sakana mofomamy avo lenta amin'ny alàlan'ny cylinder mamorona, ary avy eo ny sakana mofomamy dia rava amin'ny alàlan'ny cylinder demolding ary atosika hiala amin'nyfitaovana.
Raha lava na lehibe ny shavings metaly, dia ilaina ny mandalo ny crusher mba hanorotoro ny shavings metaly ho poti-habe poti, ary avy eo dia manindry azy ireo ho endrika araka ny dingana etsy ambony. Koa satria somary ariana ny potipoti-by, dia mora ny mizara tsy mitovy na manakana ny lasitra mandritra ny fizarana. Azontsika atao ny mametraka fitaovana fanerena visy conveyor amin'ny milina mofomamy vita amin'ny metaly, izay afaka manatsara be ny fampisehoana sy ny kalitaon'ny fitaovana.
2. Tandremo ny fiasan'ny fitaovana
1. Haratra metalyny fitaovana isan-karazany sy ny naoty dia tokony ho tsindriana misaraka. Tsy azo afangaro sy afangaro izy ireo. Izany dia tsy hanatsara ny kalitaon'ny mofomamy miforona, fa hampitombo ny fiainan'ny fitaovana;
2. Tokony hodiovina alohan'ny fanindriana ny fasika metaly, indrindra fa ny fasika, ny voaly, sns. Tsy tokony afangaro amin'ny fametahana metaly;
3. Raha misy potika metaly misy menaka, dia tokony hosivanina sy esorina ny menaka fako mba tsy hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny mofomamy miforona;
4. Ny fanerena samihafa dia tokony hofantenana ho an'ny milina mofomamy mofomamy vy mba hanesorana ireo poti-vy misy loto samihafa. Rehefa manitsy ny tsindry, dia tokony hamboarina araka ny fepetra takian'ny mpanamboatra, ary tsy azo ahitsy amin'ny sitrapo;
5. Nandritra ny dingan'ny fiasan'ny mofomamy mofomamy metaly milina, tokony hojerena amin'ny fotoana rehetra. Na misy solika mitete na tsindrim-peo ny fitaovana, dia tokony hohavaozina ara-potoana mba hisorohana ny fiparitahan'ny lesoka.
Alohan'ny hividianana na famokarana dia tokony ho mahay amin'ny fahatakarana sy fifehezana ny fizotran'ny asa sy ny fitandremana ny milina fanodinana metaly ianao. Rehefa miasa araka ny tokony ho izy ny fitaovana dia tsy maintsy mitandrina foana ny fiasan'ny fitaovana ianao. Tsy maintsy misy fomba fiasa ara-potoana amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna maro.
Baler baoritra vita an-trano, Leaf Compactor sy Baler, Aluminum Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Scrap Metal Compactor,